चागा मशरूम (Inonotus obliquus) धेरै शक्तिशाली फाइटो-रसायनमा समृद्ध छन् (जस्तै: पोलिसेकेराइड्स, बेटुलिनीक एसिड, ट्राइटरपेनोइड्स), जसले स्वास्थ्यलाई योगदान दिन र रोगहरूसँग लड्न प्रख्यात छ। चागा एक्स्ट्र्यासनको लागि उच्च-शक्ति अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर उच्च गुणस्तर र उत्पादनको उत्कृष्ट चागा अर्क उत्पादन गर्न रुचाइएको तकनीक हो।
अल्ट्रासोनिक्स द्वारा चागा मशरूम एक्स्ट्रक्ट्स
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्सन बोटानिकलहरू जस्तै प्लान्ट्स र फgi्गलबाट फाइटोकेमिकल यौगिकहरू छोड्ने अत्यधिक प्रभावकारी टेकनीक हो।
चागा मशरूम धेरै यौगिकहरुमा धनी छन् जस्तै पोलिसेकाराइड्स, ट्राइटरपेन्स, र पोलिफेनोलहरू, जुन यसको स्वास्थ्य प्रवर्धन र उपचारात्मक प्रभावहरूको लागि जिम्मेवार छन्। चागाको प्रमुख बायोएक्टिभ यौगिकहरू हुन्: पोलिसेकार्डाइड्स (उदाहरणका लागि, β-ग्लुक्सन, प्रोटीोग्लाइकन्स, d-galactose, d-glucose, d-xylose, र d-mannose), triperpenoids (उदाहरणका लागि, betulin, betulinic Acid), polyphenol, phytosterol (उदाहरण, inototrodol)। ) अन्य यौगिकहरूको बीचमा।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्षणले चागा मशरूमको कोशियाहरू कुशलतापूर्वक विच्छेद गर्दछ र इन्ट्रासेलुलर यौगिकहरू (अर्थात्, बायोएक्टिभ फाइटोकेमिकल्स) विलायकमा निकाल्छ। अल्ट्रासोनिक निकासी ध्वनी cavitation को काम सिद्धान्त मा आधारित छ। अल्ट्रासोनिक / ध्वनिक cavitation को प्रभाव उच्च कतराहरू बल, turbulences र गहन दबाव भिन्नता हो। यी सोनोमेकेनिकल शक्तिहरूले सेल्टिन संरचनाहरू जस्तै किटिनस मशरूम सेल भित्ताहरू भ break्ग गर्छन्, चागा सामग्री र विलायक बीच सामूहिक स्थानान्तरण बढावा दिन्छन् र परिणाम द्रुत प्रक्रिया भित्र धेरै उच्च निकाल्ने उत्पादनको परिणाम दिन्छ। थप रूपमा, Sonication ब्याक्टेरिया र जीवाणु मार्न द्वारा निकाल्ने बाँझीकरण लाई बढावा दिन्छ। Sonication द्वारा माइक्रोबियल निष्क्रियता कोशिका झिल्ली को विनाशकारी cavitational बलों को एक परिणाम हो, स्वतन्त्र रेडिकल को उत्पादन, र स्थानीय तताउने।
अल्ट्रासोनिक चागा एक्स्ट्र्यासनको फाइदा
अति कुशल – उच्च उपज
एक चरण, एक-भाँडो निकासी
अल्ट्रासोनिक अर्कर UIP2000hdT औद्योगिक चागा मशरूम को लागी (Inonotus obliquus) निकासी
अल्ट्रासोनिक चागा एक्स्ट्र्याकसन किन यत्तिकै उपयोगी छ?
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन एक्स्ट्र्याक्ट उत्पादनको धेरै क्षेत्रहरूमा लागू गरिन्छ, जस्तै: बोटानिकल र हर्बल एस्ट्रक्सट्स फूड्स, सप्लीमेन्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स र सौन्दर्य प्रसाधनहरूका लागि। अल्ट्रासोनिक निकासीको एक प्रख्यात उदाहरण क्यानाबिडियोल (CBD) र भांग प्लान्टबाट अन्य यौगिकहरूको निकासी हो।
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन एक गैर-थर्मल निकासी प्रविधिको भएकोले, बायोएक्टिभ यौगिकहरू हल्का रूपमा अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरूको साथ प्रशोधन गरिन्छ र यसैले संवेदनशील प्लान्ट यौगिकहरूको थर्मल गिरावट रोकिन्छ। सबै अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरू, अर्थात् आयाम, तीव्रता, तापमान र दबाव, ठीक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले सटीक प्रक्रिया र गुणवत्ता नियन्त्रणको लागि अनुमति दिन्छ र एक पटक प्राप्त निष्कर्षण परिणामहरू दोहोर्याउँदछ र प्रजनन गर्न यो सजिलो बनाउँदछ। एक्स्ट्र्याक्ट उत्पादकहरूले यसको विश्वसनीय प्रक्रिया दोहोर्याउनको लागि अल्ट्रासोनिकेसनको मान गर्दछ, जसले प्रक्रिया र उत्पादनहरूलाई उच्च गुणस्तरमा मानक गर्न मद्दत गर्दछ।
उच्च गुणवत्ता, Sonication द्वारा उच्च उपज चागा एक्स्ट्रैक्टहरू
अनुसन्धानले पुष्टि गर्दछ कि अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पादन गरिएको चागा मशरूम एक्स्ट्र्याक्ट्समा परम्परागत तातो पानी निकाल्ने भन्दा ट्रिटर्पेनोइड बढी हुन्छ। अल्ट्रासोनिक निकासी प्रविधीले चागा (आई। ओब्लिकस) च्याउबाट सबै महत्त्वपूर्ण यौगिकहरूको रिलीज र अलगावलाई बढावा दिन्छ। अल्ट्रासोनिक रूपमा सहयोगी निकासीले उत्कृष्ट दक्षता र मशरूम एक्स्ट्र्याक्टमा बायोएक्टिभ फाइटोकेमिकल्सको बृद्धि हुने जैविक उपलब्धताद्वारा वैकल्पिक निष्कर्षण विधिहरूलाई उत्कृष्ट बनाउँछ। वैज्ञानिक अनुसन्धान अध्ययनहरूको अंशहरूले उच्च दक्षता र अल्ट्रासोनिक चागा निकासीको उपज प्रदर्शन गर्दछ।
चागाबाट Polysaccharide निकासी
Zhang एट अल। I. obliquus बाट १ys मिनेट विलायकको रूपमा पानीको घोलकको रूपमा प्रयोग गर्ने उत्तम सर्तहरूसहित अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी निकासीको साथ १ minutes मिनेटको लागि विलायकको रूपमा पानीको उपयोग गर्ने उत्तम सर्तहरूसहित अल्ट्रासोनिक सहयोगी निकासी प्रयोग गरियो जसले १.82२% को निकासी मानहरू प्रदान गर्‍यो।
बेगालिन / बेगुलिनिक एसिड चागाबाट निकासी
परिणामहरूले देखाउँदछ कि अल्ट्रासाउन्डले बेटुलीन र बेटुलिनिक एसिड निकाल्नमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो किनकि यसले सेलको भित्ताहरू खोल्न बाध्य गर्न सक्दछ र अझ राम्रो मास र तातो ट्रान्सफरलाई बढावा दिन्छ। यसले परिणामस्वरूप उच्च क्षमताको साथ छोटो समयमा इच्छित फाइटोकेमिकल्स सफलतापूर्वक निकाल्न मद्दत गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेसन पछि घोलक निकासी चरण थपेर उत्पादनमा भएको सानो वृद्धिले संकेत गरे कि यी प्राय जसो मिश्रणहरू बायोमासबाट बाहिर निकालेको हुनुपर्छ। प्राप्त परिणामहरूले बायोमासमा निकाल्ने योग्य बेटुलीनको अधिकतम रकम स .्केत गर्दछ। (Alhazmi, २०१)) समग्र, अल्ट्रासोनिकेसनले नाटकीय रूपमा बेटुलीन र betulinic एसिड उत्पादन बढायो।
अल्ट्रासोनिकरेटर UP400St सीगा S24D22L2 सँग chaga (Inonotus obliquus) को लागि
चरण-देखि-चरण एक्स्ट्र्यासन प्रोटोकल
चागा मशरूमहरू (Inonotus obliquus) बाट एक पूर्ण पूर्ण स्पेक्ट्रम एक्स्ट्र्याक्टलाई अलग गर्नका लागि, पावर अल्ट्रासोनिक्सको प्रयोग गरेर दुई चरण निकासी प्रोटोकल लागू गरियो।
सामग्री: सुक्खा I obliquus (१००) लगभग सानो टुक्रा मा कुचिन्छ। १,3 सेमि २ (०.।)×0.5 इन्च)। Chrused मशरूम सामग्री एक 1.5L गिलास बीकर मा राखिएको छ।
चरण: अल्ट्रासोनिक चिसो निकासी: सुक्खा, जमिनको चागालाई शुद्ध वा आसुत पानी (v / v; %०% इथेनॉल: %०% पानी) मा %०% इथेनॉलको १००० मिलिमिटरमा निलम्बित गरिएको छ। निकासीको लागि, एक अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टर UP400St Sonotrode S24d22L2D द्वारा सुसज्जित छ। अल्ट्रासोनिकेटरको सी horn (Sonotrode) मशरूम र सॉल्भन्टको निलम्बनमा डुबाइएको छ। एक स्टिलरको प्रयोग वैकल्पिक हो, तर प्लान्टको कणलाई सोनाट्रोडमा समान रूपमा सार्न मद्दत गर्न सक्छ। यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि सोनोट्रोडले बेकरको भित्तामा नछोओस्। आयाम १००% सेट गर्नुहोस् र करीव सोनिकेट गर्नुहोस्। १० मिनेट UP400St प्लगेबल तापमान सेन्सरको साथ आउँदछ। अल्ट्रासोनिकेटरको साथ थर्मोकपल जोड्नुहोस् र निलम्बनमा सेन्सर घुसाउनुहोस्। अल्ट्रासोनिक उपकरण UP400St को डिजिटल मेनूमा, तपाईं माथिल्लो तापमान सीमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। अल्ट्रासोनिकेटर पज गर्दछ जब यो तापमान अधिकतम पुगेको छ र स्वचालित रूपमा सुरु हुन्छ निलम्बन सेट ∆T को कम मानमा पुगेको छ। सिफारिश गरिएको valuesT मानहरू लगभग हुन्। °० डिग्री सेल्सियस माथिल्लो र २० डिग्री सेल्सियस कम तापमान मानको रूपमा। एक पानी वा आइस स्नान को उपयोग Sonication समयमा तापमान कम राख्न मद्दत गर्दछ। Sonication पछि, मशरूम घन फिल्टर र प्रेस द्वारा हटाइन्छ। झिकिएको फाइटो रसायनको विलायकले भ्याकुम वाष्पीकरण वा रोटर-वाष्पीकरण हुँदैछ ताकि अन्ततः इथानोल-एक्स्ट्र्यासनबाट चगा अंश प्राप्त हुन्छ। अवशिष्ट चागा घन एक वैकल्पिक दोस्रो भिगोने चरण, अल्ट्रासोनिक तातो निकासी को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
चरण (वैकल्पिक): अल्ट्रासोनिक हट निकासी: पहिलो निकासी बरामद चागा कच्चा माल चाग्ना मशरूममा अझै बाँकी फाइटोकेमिकल्सको अंश अलग गर्न अल्ट्रासोनिक तातो निष्कर्षणको दोस्रो चरणमा प्रयोग गरिन्छ। फ fun्गस सामग्रीलाई एक गिलास बीकरमा राखिन्छ, fresh०० एमएल ताजा %०% इथेनॉल: %०% पानी विलायक समाधान थपिन्छ र लगभग गरम गरिन्छ। °० डिग्री सेल्सियस Sonication समयमा, तापमान 95 ° C मा वृद्धि गर्न सक्छन्। थप तापले अवशिष्ट फाइटोकेमिकल्सको रिलीजलाई बढावा दिन्छ। किनकि प्रायः सबै थर्मो-संवेदनशील यौगिकहरू चरण १ मा थर्मली नियन्त्रणको शर्तमा झिकिएका छन्, यो दोस्रो चरण वैकल्पिक रूपमा धेरै शक्तिशाली निकाल्नको लागि लागू गर्न सकिन्छ, जुन चागा मशरूमका सबै फाइटोकेमिकल्समा पूर्ण हुन्छ। निलम्बन UP400St को साथ माथि वर्णन गरे झैं बेबिलोन छ। फिल्टर निकाल्नुहोस्, प्रेस गर्नुहोस् र पानी निकासीबाट मशरूमहरू अलग गर्नुहोस्। दोस्रो निकासीमा फाइटो घटकहरू वाष्पीकरणको माध्यमबाट पनि पृथक छन्।
दुबै चगा एक्स्ट्रैक्ट फ्र्याक्सन, पानी र इथानोल एक्स्ट्र्यासनबाट, सँगै मिसाइन्छ ताकि पूर्ण स्पेक्ट्रम चगा मशरूम एक्स्ट्र्याक्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो एक्स्ट्र्याक्ट बिभिन्न उत्पादनहरू जस्तै टिन्चरहरू, क्याप्सूल वा खाद्य उत्पादनहरूमा फर्मूला गर्न सकिन्छ।
यो प्रक्रिया कुनै पनि अन्य भोल्युममा पूर्ण रूपमा रैखिक स्केलेबल हो। उस्तै अल्ट्रासोनिक प्यारामिटरहरू (अल्ट्रासोनिक तीव्रता डब्ल्यू / एल, दबाब, तापमान, ठोस: तरल एकाग्रता) लागू गर्दै, अल्ट्रासोनिक चागा एक्स्ट्रक्शनको सबै एक पटक स्थापित परिणामहरू समान परिणामहरू (जस्तै उत्पादन, प्रक्रिया दक्षता)।
विलापको तपाईंको विकल्प
अल्ट्रासोनिक निकासी कुनै विलायकसँग उपयुक्त छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको प्राथमिकता को विलायक प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। माथिको चगा एक्स्ट्रेसन प्रोटोकलमा हामी vent०% इथेनॉल: %०% पानी (v / v) समावेश विलायक समाधानको सिफारिस गर्दछौं। इथेनॉल र पानीको संयोजनले विभिन्न ध्रुवहरूको फाइटोकेमिकल्स रिलीज गर्न सक्षम गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, एक दोस्रो चरण चरणमा इथेनोल र दोस्रो निकासी चरणमा पानी प्रयोग गरेर दुई चरणको निकासी लागू गर्न सकिन्छ। मदिरा र पानीको घुलनशील संयोजनको प्रयोग गरेर अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनले पानीको घुलनशील र मदिरा-घुलनशील फाइटोकेमिकलहरूलाई चागा जस्ता मशरूमहरूबाट मुक्त गर्दछ।
तसर्थ, निष्कर्ष शुद्ध र सामर्थ्य मशरूम एक्स्ट्र्याक्स सिर्जना गर्न मौलिक छ।
ईनोनटस ओब्लिक्वस एक्स्ट्र्यासनको लागि प्रयोग हुने अन्य घोलकहरू isopropanol, methanol, methanol १०% एसिटिक एसिड समावेश गर्दछ, अन्यमा ईथिल एसीटेट। फूड-ग्रेड एक्स्ट्रक्सको लागि, एक गैर-विषाक्त विलायक सिफारिस गरिएको छ, किनकि विलाप हटाएपछि (उदाहरणका लागि वाष्पीकरण) कहिलेकाँही अवशिष्ट ट्रेस मात्रा निकाल्न सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक चागा एक्स्ट्र्यासनको लागि प्यारामिटरहरू प्रशोधन गर्नुहोस्
Sonication तीव्रता (Ws / L)
कच्चा मालको कण आकार
दवाव अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शन तीव्र पार्दछ
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सको औद्योगिक एक्सट्रक्टरहरू प्राय: बन्द रिएक्टरहरू वा इनलाइन फ्लो-थ्रु रिएक्टरहरूसँग स्थापित हुन्छन्, जसलाई दबाब दिन सकिन्छ। उन्नत दवावको आवेदन पावर अल्ट्रासाउन्ड द्वारा उत्पन्न ध्वनिक cavitation तीव्र र त्यहाँ निष्कर्षण प्रक्रिया लाभदायक रूपमा प्रभाव गर्दछ।
चागा एक्स्ट्र्यासनको लागि उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिकरेटरहरू
अल्ट्रासोनिक निकासी एक विश्वसनीय प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी हो, जसले विभिन्न कच्चा पदार्थहरू जस्तै चागा र अन्य मशरूमहरूको उच्च-गुणस्तर अर्कको उत्पादनलाई सुविधा र सुविधा प्रदान गर्दछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स पोर्टफोलियोले कम्प्याक्ट ल्याब अल्ट्रासोनिकेटरहरूबाट औद्योगिक निष्कर्षण प्रणालीसम्म पूर्ण दायरा कभर गर्दछ। यसैले, हामी हिलस्चरमा तपाइँ तपाइँको परिकल्पना गरिएको प्रक्रिया क्षमताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर प्रस्ताव गर्न सक्दछौं। हाम्रो लामो समय-अनुभवी कर्मचारीले तपाईंलाई अन्तिम उत्पादन स्तरमा तपाईंको अल्ट्रासोनिक प्रणालीको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता परीक्षण र प्रक्रिया अनुकूलनबाट सहयोग गर्दछ।
हाम्रो अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको सानो फुट-प्रिन्टको साथै स्थापना विकल्पहरूमा उनीहरूको बहुमुखी प्रतिभाले तिनीहरूलाई सानो अन्तरिक्ष पेक्टिन प्रशोधन सुविधाहरूमा पनि फिट बनाउँदछ। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू खाद्य, फार्मा र पोषण पूरक उत्पादन सुविधाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छन्।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद पोर्टफोलियोले उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको पूर्ण श्रृंखलालाई सानोदेखि ठूलासम्म कभर गर्दछ। थप सामानहरूले तपाईंको चागा एक्स्ट्र्यासन प्रक्रियाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक उपकरण कन्फिगरेसनको सजिलो संयोजनको लागि अनुमति दिन्छ। इष्टतम अल्ट्रासोनिक सेटअप परिकल्पना गरिएको क्षमता, भोल्यूम, कच्चा माल, ब्याच वा इनलाइन प्रक्रिया र समयरेखामा निर्भर गर्दछ।
ब्याच र लगातार प्रवाह माध्यम
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ब्याच र लगातार प्रवाह-थ्रु प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक ब्याच प्रोसेसिंग प्रक्रिया परीक्षण, अनुकूलन र सानोदेखि मध्यम आकारको उत्पादन स्तरको लागि आदर्श हो। चागा मशरूमको ठूलो मात्रामा उत्पादनको लागि, इनलाइन प्रशोधन बढी लाभदायक हुन सक्छ। एक अविरल इनलाइन मिक्सिंग प्रक्रियालाई परिष्कृत सेटअप आवश्यक पर्दछ – पम्प, होसेस वा पाइप र ट्याks्कमा समावेश छन् - तर यो अत्यन्त कुशल, छिटो छ र कम श्रमको आवश्यकता छ। सबै औद्योगिक प्रणालीहरू माथिल्लो दबावमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले काभेटेशन र त्यहाँ निकाल्ने दक्षता बढाउँदछ। तपाईको निष्कर्षण भोल्युम र प्रक्रिया लक्ष्यहरूको लागि हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्ससँग सबै भन्दा उपयुक्त निकासी सेटअप छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद दायराले प्रति घण्टा ट्रक भार प्रसंस्करण गर्ने क्षमतासहित बेन्च-टप र पायलट प्रणालीहरूमा कम्प्याट ल्याब अल्ट्रासोनिकेशर्सबाट कम्प्याक्ट ल्याब अल्ट्रासोनिकेशर्सको पूर्ण स्पेक्ट्रम कभर गर्दछ। पूर्ण उत्पाद दायराले हामीलाई तपाईंको चागाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको साथै अन्य मशरूमहरू, प्रक्रिया क्षमता र उत्पादन लक्ष्यहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन् र यसरी उत्पादनमा भरपर्दो कार्य घोडाहरू। आयाम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जसले चागा मशरूम (Inonotus obliquus) बाट फाइटोकेमिकल्सको अल्ट्रासोनिक निकासीको दक्षता र प्रभावलाई असर गर्दछ।
सटीक आयाम सेटिंग्स र स्मार्ट सफ्टवेयर मार्फत अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरूको स्थायी अनुगमनले तपाईंलाई मशरूमको कच्चा मालको सबैभन्दा प्रभावकारी अल्ट्रासोनिक सर्तहरूको उपचार गर्ने सम्भावना दिन्छ। उत्तम निष्कर्षण परिणामहरूको लागि इष्टतम Sonication!
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा रैखिक मापन गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले ल्याब वा बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरको प्रयोग गरेर प्राप्त गर्नुभएको प्रत्येक परिणामको रूपमा, उही समान प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर ठीक उही आउटपुटमा मापन गर्न सकिन्छ। यो जोखिम मुक्त सम्भाव्यता परीक्षण, प्रक्रिया अनुकूलन र वाणिज्यिक निर्माणमा पछिको कार्यान्वयनको लागि अल्ट्रासोनिकेसन आदर्श बनाउँछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कसरी Sonication तपाईंको चागा निकासी उत्पादन बढाउन सक्दछ।
पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको र पारिवारिक रूपमा सञ्चालित व्यवसायको रूपमा, हिल्सचरले आफ्नो अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूको लागि उच्च गुणस्तरको प्राथमिकता दिन्छ। सबै अल्ट्रासोनिकेटरहरू जर्मनीको बर्लिन नजिकको टेल्टोमा रहेको हाम्रो मुख्यालयमा डिजाइन, निर्माण र राम्ररी परीक्षण गरीएको छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूको दृढता र विश्वसनीयताले यसलाई तपाईंको उत्पादनको काम घोडा बनाउँछ। २ load/7 अपरेशन पूर्ण लोड र माग वातावरणमा सञ्चालन हिल्सचरको उच्च प्रदर्शन एक्स्ट्रक्टरहरूको एक प्राकृतिक विशेषता हो।
तपाईं कुनै पनि फरक आकारमा हिल्सचर अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईको मशरूम निष्कर्षणको प्रक्रिया आवश्यकतामा ठीक कन्फिगर गर्नुहोस्। एउटा सानो ल्याब बीकरमा फ fun्गको उपचार गर्नदेखि औद्योगिक स्तरमा मशरूम स्लरीको मिश्रणको निरन्तर प्रवाह-मार्फत, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले तपाईंको लागि उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर प्रदान गर्दछ! कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् – हामी तपाईंलाई आदर्श अल्ट्रासोनिक सेटअप सिफारिस गर्न खुशी छौं।
साहित्य / सन्दर्भ, क्रेडिट
Inonotus obliquus, जसलाई चागा मशरूम पनि भनिन्छ, एक परजीवी पोलिपोरस मशरूम हो। औषधीय बासिडियोमाइटेट्स फ fun्गसको रूपमा, चागालाई क्रमशः हाइमेनोचेटासी परिवार, हाइमेनोचैतेलीज अर्डर, र अगारीकोमासिट्स वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ। चागा एकदम चिसो प्रतिरोधी छ, यसको माइसेलियम जs्गलमा बढिरहेको छ जुन तापक्रम −−० डिग्री सेल्सियससम्म रहन्छ। चागा फ fun्गसले कडा काठ रूखहरूलाई सects्क्रमित गर्दछ र प्राय: जसो ब्रीचमा बढ्दै जान्छ र थोरै हदसम्म जेनेरा क्युक्रस (ओक्स), पोपुलस (पप्लर), एलनस (एल्डरहरू), फ्यागस (खरानी), र एसर (मानचित्र) । यो सामान्यतया ––-–० डिग्रीको अक्षांशमा अवस्थित हुन्छ र उत्तरी यूरोप, क्यानडा, पोल्याण्ड, रुस, जापानको होक्काइडो क्षेत्र, साथै हेइलोंगजियांग प्रान्त र चीनको चांगबई हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। चागा (आई। ओब्लिकस) ले यसको अत्यधिक प्रभावी फाइटोकेमिकल्सका कारण पोषण र औषधीय अनुसन्धानमा बढ्दो ध्यान आकर्षित गरेको छ जुन एंटी-ट्यूमर, एन्टिऑक्सिडिभ, इम्युनोमोडुलेटर, र एन्टी-अस्थमाटिक प्रभावहरू प्रदान गर्दछ, साथै अन्य औषधीय फाइदाहरूका कारण। धेरै अध्ययनहरूले देखाए कि चागा मशरूमको पोलिसेकेराइड एक प्रमुख बायोएक्टिभ घटक हो जसले इनोोटस ओबिलिकस मशरूमलाई उनीहरूको स्वास्थ्य लाभदायी गुणहरू प्रदान गर्दछ।